August 2, 2020 – Page 2 – Kichuu
Manni Maree Federeeshinii filannoo Tigraay dhaabsisuu danda’aa? Qophii filannoo naannoo Tigiraayfi xalayaa akeekkachiisaa Mana Maree Federeeshinii, dhugaan kan eenyyuuti? Murtoon Mana Maree Federeeshinii mirga lammileefi sabaafi sablammootaa kan mulqeefi mootummaan abbaa irree akka ijaaramuuf kan [Read More]
Siyaasa Itoophiyaa: Naannoo Tigraayitti humnoonni nageenyaa agarsiisa waraanaa taasisaan Naannoo Tigraay Magaalaa Maqaleetti miseensonni humna addaafi milishoonni hidhatan hiriiraa waraanaa taasisaniiru. (bbcafaanoromoo)–Hiriiricharratti qaamoleen nageenyaa naanncihaa meeshaalee waraanaa salphaafi ciccimaa hidhatanii mul’ataniiru. Hidhatoonni kunneenis daandiiwwan magaalattii [Read More]
Nobel Laureates In Crisis Mode The Democratization Of Ethiopia On A Fine Line Between Success And Failure Parliamentary elections were supposed to be held in Ethiopia in August 2020. But in view of the Corona [Read More]
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Dodolaa irraa. Hagayya 2 /2020 Erga oromoo fi oromiyaan sirna kolonii habashaa jalatti kuftee kaasee oromoonis falmaa hin dhiifne, diinni gabrummaa nurratti dheerffachuuf jecha tooftaan inni hin fayyadamne hin jiru. Tooftaalee diinni [Read More]
Mass arrest of dissidents threatens to derail Nobel Peace Prize-winning PM’s reform He was hailed as Ethiopia’s ‘saviour’ for bringing peace to the Horn of Africa, picking up the Nobel Peace Prize for his efforts. [Read More]
Naannoon Tigraay hiree ofii murteeffattee jirti.
Naannoon Tigraay hiree ofii murteeffattee jirti. Bilisummaa jechuun akka Ashaangulliitii Nafxanyaadhaaf ergamanii qabsoo fi qabsaa’ota oromoo balleessuuf hojjachuu osoo hin taane akka Tigraay kanatti biyya ofiirratti mirga ofii kabajchiisuudha. Oromoonis kanaaf qabsaa’aa jira. Hiree ofii [Read More]